दाइजोलाई चुनौती दिदै अन्तरजातिय विवाह - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश प्रदेश २ दाइजोलाई चुनौती दिदै अन्तरजातिय विवाह
फरक जातका मुकेश र अनुराधाको प्रेमका अगाडी हारे दुबैका बुबा
By राकेश गुप्ता
सर्लाही । दाइजो प्रथालाई चुनौती दिदै एक जोडिले आदर्श विवाह गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडिले अभिभावकलाई राजी गराउन भने निकै धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो । मधेसमा दाइजो नलिई बिबाह गर्छु भनेर सोच्नु फलामको चिउरा चपाउनु जतिकै गाह्रो छ ।
सर्लाही जिल्लाको चक्रघटा गाउँपालिका वडा न. ३ सुन्दरपुर निवासी राकपुकार साहको २५ बर्षिय छोरा मुकेश साहले भने परिवारलाई मनाएरै दाईजो बिहिन बिबाह गरे ।
कलेजको त्यो भेट
मुकेशले २०६६ सालमा देवधारी माध्यमिक विद्यालय सुन्दरपुरबाट एस एलसी दिएपछि विरगंजमा रहेको जनज्योति उच्च माध्यमिकबाट वाणिज्य संकायमा प्लस टु उत्तिर्ण गरे । स्नातक अध्ययनका लागि काठमाडौं छिरेका मुकेशले काठमाडौंमा मेघा कलेज भर्ना भए त्यहि कलेजमा भेट भयो रौतहट जिल्ला चन्द्रनगर नगरपालिका २ निवासी महेन्द्र गुप्ताको छोरी अनुराधा गुप्तासंग ।
अनुराधा भर्खरै एसएलसी उत्तीर्ण गरेर कलेज पढन काठमाडौ छिरेकी थिइन् । दुवैजना एउटै समाजिक परिवेशबाट आएकोले दुवैको लागि उपत्यका नौलो ठाउँ थियो । दुवैमा मित्रता हुनु नौलो थिएन ।
यहि भेट विस्तारै प्रेममा परिवर्तन भयो । उनीहरुको हिमचिम सुरु भएको अनुराधाकी मामा हुदै आमाबुबासम्म कुरा पुग्यो । भनिन्छ मधेसी समाजमा विवाह अगाडी प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता अझै कमजोर छ । त्यसमाथी उनीहरुको जात फरक थियो ।
पारिवारिक दवावमा काठमाडौ छाडिन् अनुराधाले
मुकेशसंग प्रेम गरेकै कारण पारिवारिक दवावमा अनुराधा काठमाडौ छाड्न वाध्य भइन् । रौतहटकै कलेजमा स्नातक तहमा भर्ना भइन् । यता मुकेश एमबिए पढनका लागि कान्तिपुर भ्यालि कलेजमा भर्ना भए ।
यो पनि पढ्नुहोस रौतहटका ८ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने प्रशासनको निर्णय
दुवै फरक फरक कलेजमा थिए । बसाई टाढा थियो तर, माया झन झन गाढा हुँदै गयो । तर, पनि सजिलै बिहे सम्भव थिएन । मधेसी समाजमा अन्तरजातिय विवाहलाई अहिले पनि संस्कार विरोधि मानिन्छ । छोरा छोरीले अर्को जातको केटासंग बिहे गर्दा नाक नै कटिन्छ भने विश्वास कायमै छ ।
जब दुबैले अभिभावकसंग कुरा गरे सहमत भएनन् । तर, उनीहरु आफु जसरी पनि विवाह गर्ने योजनामा थिए । अनुराधाले पार्ट टाइम जागीर खोजिन् र कोठा भाडामा लिएर घरवाट छुट्टै बस्न थालिन् ।
जब घर छाडे
यता मुकेशले पनि त्यहि शैली अपनाए । मुकेश कृषि विकास बैंकमा काम गर्छन भने अनुराधा जनता लाईफ इन्स्योरेन्समा । जागीर खाएपछि पनि उनीहरुले आ आफ्ना बुबालाई मनाउन सकेनन् । अनुराधा भन्छिन् ‘अन्तिममा १० कक्षा पठ्दै गरेको मेरो भाइले मलाई विवाह गर्ने प्रेरणा दियो ।’
अन्ततका उनीहरुका दुबै बाहरुले हारे र परिवारक सहमति हिन्दु विधिपूर्वक सर्लाही जिल्लाको नयाँरोड स्थित सिता पैलेस होटेलमा विवाह सम्पन्न भयो, त्यो पनि दाईजो बिहिन । ‘हाम्रो होटेलमा लगनको दिन प्राय विवाह भइरहन्छ । दाईजो विनाको विवाह यो पहिलो हो ।’ होटेलका मेनेजर मुकुन्द बस्नेतले बताए ।
तुलसी भण्डारी - December 3, 2020
रमेश तिमलसिना - December 3, 2020
बौद्धमा आमाछोरी मृत फेला, श्रीमान अचेत
काठमाडौँ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ नयाँपाटीमा एक महिला आफ्नो एक महिनाकी छोरीसहित मृत फेला परेकी छन् । सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका स्थायी घर भई नयाँपाटी बस्दै...
तीन दिनभित्र कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयकाे निर्देशन
अर्थ राजधानी समाचारदाता - December 3, 2020
काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तीन दिनभित्र गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्ला दिनमा कोरोना बीमा दाबी...
श्री एयरलाइन्सको ढोका नखुल्दा ७० यात्रु भित्रै थुनिएपछि…
Breaking News दीपक ओली - December 3, 2020
धनगढी । काठमाडौँबाट धनगढी आएको श्री एयरलाइन्सको ढोका नखुल्दा यात्रु भित्रै थुनिएका छन् । आज बिहीबार बिहान ९ बजे २३ मिनेटमा धनगढी विमानस्थलमा अवतरण जहाजको...
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - November 28, 2020
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना आँखा अगाडि सिङ्गो नेकपा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा...
भक्तपुरमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ सानोठिमी एसओएस चोकमा सोमबार मध्यराति स्कुटर दुर्घटना हुँदा मध्यपुरथिमि राधेराधे चोक बस्ने चालक २९ वर्षीय राजु तामाङको मृत्यु भएको छ...
प्रदेश ३ रासस - December 3, 2020
चितवन । जिल्ला कारागार भरतपुरबाट कैदी फरार भएका घटनामा दुई प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ । कारागार सुरक्षामा खटिएका ती प्रहरीलाई असावधानी अपनाएको भनी निलम्बन...
रोनाल्डो अर्का कीर्तिमानतर्फ
एजेन्सी - November 13, 2020
लिस्वन । जति उमेर ढल्कँदो छ, त्यति नै आधुनिक फुटबलका हस्ती क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोल गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसको अर्थ ‘एज इज जस्ट...
सुरज श्रेष्ठ - April 22, 2020
काभ्रेपलाञ्चोक । कोरोना भाईरसको त्रासमा मुलुक लकडाउनको बेलामा जर्बजस्ति करणी अभियोगमा फरार रहेका तीन फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ...
रंगीन टिभीको आयात बढ्दो
अर्थ तुलसी भण्डारी - March 22, 2020
वीरगन्ज । रेमिट्यान्सले अधिक खर्च धानेको मुलुकका जनताले चालू आर्थिक वर्षबाट ब्लाक एन्ड ह्वाइट टेलिभिजनलाई विस्थापन गरिदिएको छ । मुलुकको...
अज्ञात समुहद्वारा मोटरसाइकलमा आगजनी
प्रदेश ५ हुमाकान्त पोखरेल - August 14, 2020
गुल्मी । गुल्मीमा अज्ञात समुहले मोटरसाइकलमा आगजनी गरेका छन् । जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ४ अर्खलेस्थित पन्थीटोलका प्रेमराज पन्थीको मोटरसाइकलमा अज्ञात समुले आगजनी...
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - October 29, 2020
काठमाडौं । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) जनकराज दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ । दाहाललाई आज बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । टाउको...
नक्सा पास नगरी स्कुलको भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण, वडाध्यक्षको गैरजिम्मेवारी जवाफ–‘सबै कुरा मलाई थाहा हुन्छ ?’
प्रदेश विवेक विवश रेग्मी - March 16, 2020
इटहरी । इटहरी ५ मा रहेको ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा निर्माणाधिन रहेको भवन नक्सा पास नै नगरी बनाईएको पाईएको छ । बिद्यालयले केही समययता मात्र...
कोरोना महामारीको सन्देश
बिचार विनोद नेपाल - April 14, 2020
हामी कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’को त्रासबीच विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष २०७७ मा प्रवेश गरेका छौं । चीनको वुहानमा डिसेम्बर ३१ मा पहिलोपटक देखिएको...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - November 29, 2020
काठमाडौं । चीनका राज्यपरिषद् सदस्य एवं रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हो नेपालको एक दिने भ्रमणमा काठमाडौं आइपुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा रक्षामन्त्री फेङ्हो...
यो पनि पढ्नुहोस बौद्धमा आमाछोरी मृत फेला, श्रीमान अचेत
दिनेश थापा - December 1, 2020
प्रशान्त वली - December 2, 2020
निराजन पौडेल - November 27, 2020
यो पनि पढ्नुहोस धान काट्दा विवाद भएपछि छोराले गरे लाठिले हानेर बाबुको हत्या